गल्तीः राति सुत्दा हाम्रो हत्केलामा अनेकौँ प्रकारले फोहोर टाँस्सिन्छन्। अनि दिउँसो भरि यताउता काम गर्दा पनि हातमा फोहोर लागेको हुन्छ। त्यसपछि अनुहार धुने बेलामा हातले सिधै अनुहारलाई छुने गल्ती गर्छौँ। यसो गर्दा हत्केलामा टाँस्सिएका फोहोर र ब्याक्टेरिया अनुहारमा सर्दछ र झन् बरबाद हुन जान्छ। गर्ने के तः त्यसैले एकैचोटि अनुहार पखाल्नुभन्दा पहिला हातलाई राम्रोसँग पखाल्नुहोस् अनि बल्ल अनुहार सफा गर्न लाग्नुहोस्।
के तपाइको दात पहेलो भएर हैरान हुनुहुन्छ ? दात लाई सेतो पार्ने घरेलु सरल उपाय जानी राखौ !
रगत बारे तपाईलाई नै थाहा नभएको यी २४ रोचक तथ्य